သတင်းစာပညာအတွက် Plagiarism ရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဘယ်လိုဂျာနယ်လစ်အခြားသတင်းထောက်များ၏လုပ်ငန်းခွင် Plagiarizing ရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါသလား?
အခြားရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟုဆိုကာ၏အမှားသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Is Make မနေပါနဲ့
ငါတို့ရှိသမျှသည်တဦးတည်းကိုလယ်သို့မဟုတ်အခြားအတွက် plagiarism အကြောင်းကိုကြားဖူးတယ်။ ဒါဟာသည်အခြားရက်သတ္တပတ်များကဲ့သို့ကျောင်းသားများ, စာရေးဆရာများ, သမိုင်းပညာရှင်နှင့်အခြားသူများ၏လုပျငနျး plagiarizing တေးရေးဆရာအကြောင်းကိုပုံပြင်များရှိပုံရသည်။
သို့သော်အများစုမှာ disturbingly ဂျာနယ်လစ်များအတွက်, သတင်းထောက်များကိုအားဖြင့် plagiarism ၏မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းက high-profile ကိုအမှုပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီ။
သူမ၏အယ်ဒီတာများသူမယှဉ်ပြိုင်သတင်းဆိုင်များတွင်အတွက်ဆောင်းပါးများအနေဖြင့်ပစ္စည်းရုပ်သိမ်းင်ရာအနည်းဆုံးခုနစ်ခုပုံပြင်များရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်ဥပမာ, 2011 ခုနှစ် Kendra Marr, နိုင်ငံရေးများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းထောက်အတွက်နုတ်ထွက်ခိုင်းခဲ့သည်။
Marr ရဲ့အယ်ဒီတာများကသူ၏ဇာတ်လမ်းနှင့် Marr ပြုသမျှတစျခုအကြားတူညီဖို့သူတို့ကိုသတိပေးသူတစ်ဦးက New York Times ကိုသတင်းထောက်ကနေဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကို၏လေတိုက်တယ်။
Marr ရဲ့ပုံပြင်ငယ်ရွယ်ဂျာနယ်လစ်များအတွက်သတိပေးပုံပြင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Northwestern University ၏မကြာသေးမီကဘွဲ့ရ သတင်းစာပညာကျောင်းတွင် , Marr ပြီးသား 2009 ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံရေးပြောင်းရွှေ့မီဝါရှင်တန်ပို့စ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးမြင့်တက်ကြယ်ပွင့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါပြဿနာ plagiarize ရန်သွေးဆောင်မှုကိုရုံ mouse ကို-click ကွာအချက်အလက်များ၏ထင်ရသောအဆုံးမဲ့ငွေပမာဏနေရာဖြစ်သောကြောင့်အင်တာနက်အစဉ်အဆက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် plagiarism ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုသတင်းထောက်တွေကိုကြောင့်ဆန့်ကျင်စောငျ့အတွက်ပိုမိုကြပ်သူဖြစ်ရမည်ဆိုလိုသည်။ ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်သို့သင့်ရဲ့အစီရင်ခံထဲမှာ plagiarism ရှောင်ရှားရန်ကိုသိရန်လိုအပ်သလဲ? ရဲ့ဝေါဟာရကိုသတ်မှတ်ကြပါစို့။
Plagiarism တစ်စုံတစ်ဦးကိုတခြားအလုပ်မရှိဘဲသင်၏ပုံပြင်ထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုဆိုကာဆိုလိုတယ် ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု သို့မဟုတ်အကြွေး။ သတင်းစာပညာခုနှစ်, plagiarism အများအပြားပုံစံများကိုယူနိုင်သည်
ပြန်ကြားရေး: ဒီအခြားသတင်းထောက်သတင်းထောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ထုတ်ဝေဖို့သတင်းအချက်အလက် crediting မရှိဘဲစုဝေးစေတော်မူကြောင်းကိုသတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြု. ပါဝငျသညျ။ ဥပမာတစ်ခုတစ်ဦးအကြောင်းကိုတိကျတဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးသတင်းထောက်ပါလိမ့်မယ် ရာဇဝတ်မှု - တစ်ဦးလူသတ်မှုသားကောင်ရဲ့ဖိနပ်ရဲ့အရောင်ကိုပြောပါ - မိမိပုံပြင်လာကြောင်း, မပေးရဲထံမှပေမယ့်အခြားသတင်းထောက်အားဖြင့်ပြုသောအမှုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကနေ။
အရေးအသား: တစ်သတင်းထောက်သူ့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်းပါးသို့အထူးသဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောလမ်းအတွက်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရေးသားခဲ့သည်နှင့်ပုံပြင်မှအခြားသတင်းထောက်မိတ္တူကျမ်းပိုဒ်ဆိုရင်, အရေးအသား plagiarizing ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကူးများ: ။ သတင်းထောက်တစ်ဦး, များသောအားဖြင့်တစ်ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်သို့မဟုတ်သတင်းသုံးသပ်သူသတင်းတခုပြဿနာနှင့်အခြားသတင်းထောက်မိတ္တူကြောင်းစိတ်ကူးအကြောင်းဝတ္ထုစိတ်ကူးသို့မဟုတ်သီအိုရီတိုးတက်လာတဲ့အခါဒီဖြစ်ပေါ်
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့အခြားသတင်းထောက်ရဲ့အလုပ် plagiarizing ရှောင်ရှားသလဲ?
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံသလား: plagiarism ရှောင်ရှားရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းသင့်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံလုပ်နေတာဖွငျ့ဖွစျသညျ။ သင်သည်အခြားသတင်းထောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းထဲကအချက်အလက်တွေကိုခိုးယူဖို့, သင်လုံးဝသင့်ကိုယ်ပိုင်ကြောင်းအလုပ်ထုတ်လုပ်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုရှိလိမ့်မယ်သွေးဆောင်မှုကိုရှောင်ရှားကြောင်းလမ်း။ သို့သော်အခြားသတင်းထောက်တစ်ဦး "ကျုံး," သင်စရာမလိုပါကြောင်းအချက်အလက်များ၏အရည်ရွှမ်းနည်းနည်းရရှိသွားတဲ့သောအရာကိုဆိုရငျကော ပထမဦးစွာသတင်းအချက်အလက်များကိုယ့်ကိုကိုယ်ရဖို့ကြိုးစားပါ။ ကြောင်းပျက်ကွက်လျှင် ...
ခရက်ဒစ်ကြောင့် Is အဘယ်မှာရှိခရက်ဒစ် Give: အခြားသတင်းထောက်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်မရနိုငျပါအချက်အလက်များ၏အပိုင်းအစတက်တူးလျှင်, သငျသညျသတင်းထောက်များအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သောသတင်းထွက်ပေါက်မှပိုမိုလေ့, ထိုသတင်းထောက်ကိုသတင်းအချက်အလက် attribute သို့မဟုတ်ရပါမည်။
သင့်ရဲ့ Copy ကူး Check: သင်သည်သင်၏ပုံပြင်ကျမ်းစာ၌ရေးထားပါတယ်ပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ကြောင်းမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုကြပြီမဟုတ်သေချာစေရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကနေတဆင့်ဖတ်ပါ။ plagiarism အမြဲတမ်းသတိလုပ်ရပ်မဟုတ်ပါဘူးသတိရပါ။ တခါတရံသူကရိုးရိုးသင်တစ်ဦး website တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဖတ်ပါတယ်သတင်းအချက်အလက်ကို အသုံးပြု. , သင့်ကိုတောင်သူကသတိထားမိဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏ပုံပြင်သို့တွားနိုင်ပါတယ် သတင်းစာ ။ သင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းအတွက်အချက်အလက်များကျော်သွားပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေး: ဒီကိုစုသိမ်းတာလားကိုယ့်ကိုကိုယ်?
ဒါရိုက်တာ Zana Briski '' တန်ဆာထဲသို့မွေးဖွားခဲ့ပြီး '' သူမ၏ပထမဦးစွာမေတ္တာကိုမှ Returns: ဓါတ်ပုံပညာ
သတင်းစာပညာအခြေခံ: ဘယ်လိုအစီရင်ခံ Tool ကိုအဖြစ်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုနည်း
အဆိုပါဒေသခံ Angle ကိုရှာပါ
တစ်ဦးပုံပြင် Angle ကဘာလဲ?
ဂျက်ဇ်ဂီတ Up ကိုသင့်ရဲ့ဘလော့သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှဂရိတ်သတင်းများက Web Widgets
Wisconsin ပြည်နယ်-Parkside အဆင့်လက်ခံရေးတက္ကသိုလ်
သမ်မာကမျြးပုံပြင်အကျဉ်းချုပ် - ယရှေုသညျ 5000 Feeds
7 Hitchcock လမ်းပြ Ladies
သည် L'elisir d'Amore ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
လူသတ်မှု၏သူမ၏ Method ကိုအဆိပ်နှင့်အဘယ်သူမျှမကလေးကို Safe ခဲ့ Janie အဘိဓါန် Lou Gibbs
RISD - ဒီဇိုင်းအဆင့်လက်ခံရေး၏ Rhode Island ကျောင်း
တစ်ဦး Lewis ကဖွဲ့စည်းပုံကိုခပ်ဖို့ကိုဘယ်လို
သင့်ရဲ့ခရစ်ယာန်အခမ်းအနားကို 20 မင်္ဂလာဆောင်သမ်မာကမျြးအခနျးငယျ
Vs. "မည်" "Going to" အနာဂတ်တင်းမာနေသှနျသငျဖို့ ESL သင်ခန်းစာအစီအစဉ်
Cal ရေကြောင်း GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ရာ - မရဏာနိုင်ငံနှင့်အမြဲ၏ဗုဒ္ဓဘာသာအိုင်ကွန်
သင်က Rosetta Stone အကြောင်းသိထားသင့်အဘယျသို့
အကောင်းဆုံး Dimmu Borgir အယ်လ်ဘန်
ဥက္ကလာဟိုးမား vs. တက္ကဆက်: အဆိုပါနီမြစ်ပြိုင်ဆိုင်မှု